Vaovao - Ahoana no hisafidianana boaty fanodinana kalitao
Ahoana ny fomba hisafidianana boaty fanodinana kalitao
Ny boaty fanodinam-bola dia mitana andraikitra lehibe amin'ny indostrian'ny fanodinam-bola sy ny lojika. Ny boaty fanodinam-bola dia afaka miara-miasa amin'ireo kaontenera lozisialy sy toeram-piasana mba hanampiana ireo orinasa hamita ny ankapobeny sy ny fitantanana fampidirana ireo kaontenera lozisialy any amin'ireo trano fanatobiana entana sy tranokala famokarana. Ilaina amin'ny fitantanana logistik maoderina ny orinasa mpamokatra sy fizarana.
Qingdao Guanyu Plastic Co., Ltd. dia mpanamboatra kaontenera lozisialy, paleta, talantalana fitahirizana, fitaovana atrikasa, fitaovana fikirakirana sns. Nandritra ny taona maro dia nanitatra tsikelikely ny ambaratongam-pamokarany ny orinasa araka ny fangatahan'ny tsena ary nanjary nalaza Sinoa. Mpamatsy vokatra mpivarotra entana sy logistics.
Aorian'izay, hasehonay anao ny fomba hisafidianana ny mpamatsy kalitao ny boaty fiovana.
Ny boaty fanodinam-bola dia tokony hanana fahaiza-miteraka tsara, ary tsy ho simba noho ny fotoana ela taorian'ny fametrahana ny entana, izay afaka misoroka ny vokatra simba.
Tsy miteraka fahamendrehana izany noho ny fihenan'ny maripana manodidina, miteraka fahasimbana.
Ny olana ara-pahasalamana, ny ampahany lehibe amin'ny totalin-jaza dia ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo. Amin'izao fotoana izao, ny fepetra takiana amin'ny indostrian'ny sakafo dia henjana tokoa, ka tsara kokoa ny misafidy vokatra mpamokatra lehibe mba hahazoana antoka ny kalitao sy ny fahadiovana.
Qingdao Guanyu dia manana ekipa mpamolavola misy injeniera zokiny izay nirotsaka tamin'ny famolavolana sy ny famokarana vokatra nandritra ny taona maro, izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra. Nandritra ny taona maro, Guanyu dia notarihin'ny filan'ny mpanjifa, niantehitra tamin'ny haitao lojika mandroso, traikefa fitantanana siantifika sy filozofia, ary namolavola tsikelikely andiam-bokatra efatra toy ny kaontenera lozisialy, fitaovan'ny gara, kojakoja fitehirizana ary fitaovana fikirakirana, ary nokaramaina tsara -mba lozisialy fantatra. Manam-pahaizana momba ny drafitra, manome ny rafitry ny rafitra lozisialy, mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa mpanamboatra isan-karazany, ny sehatry ny fikarohana, ny oniversite ary ny oniversite amin'ny vokatra sy programa logistik.
Fotoana fandefasana: Mey-18-2021
Fametrahana fantsom-pifidianana, Tranon-tahiry azo itehina, Stack & Hang Bins, Fametahana fitoeram-bokatra, Tavoahangy plastika mifatotra, Bins fitehirizana plastika azo stackable,